ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ဟာကို ပြမစားရင် ဘာကို ပြစား ရမလဲလို့ ဒဲ့ပဲ မေးခွန်းထုတ် လိုက်ပြီး ကြမ်းထားတဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ ဗီဒီယို – Ever Best
ရွှေအိမ်စည် က တော့ Miss အလှ မယ် ၊ မော်ဒယ်လ် တစ် ယောက် ပါ ။ ဆံပင် ရှည်ရှည် လေး နဲ့ ကျော့ရှင်း ပြီး ကိုယ့် ကိုယ် ကို ယုံကြည် မှု အ ပြည့် ရှိ တဲ့ သူမရဲ့ ဟန်ပန် အမူ အရာတွေက ပရိသတ် တွေ ကြားမှာ အတော် လေးကို ရေပန်း စားနေ ပါ တယ် ။
ရွှေအိမ်စည် က တော့ စကား ပြော ရင် လည်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြော တတ် ပြီး သူမကို အမျိုးသား ပရိ သတ် ထက် အမျိုးသမီး ပရိသတ် တွေ က ပိုမို သ ဘောကျ အားပေး တာ ကို တွေ့ရပါတယ် ။ ” ကိုယ့် ရဲ့ LOOK ကို ပြ ပြီး စားချင် တဲ့ အ တွက် ဒီ Modeling Industry / မော်ဒယ် လော က ထဲ ကို ဝင်လာ တာ လေ ။
ကိုယ့် မှာ ရှိ တဲ့ အရာ တွေ ကို ပြမ စား ရရင် ဘာကို ပြစား ရမလဲ ? ကျမ ရဲ့ ရင်သား တွေ က ဘယ်သူ့ ကို ဘာ လုပ်ထား လို့လဲ မသိ ဘူး.. ဒါကို အရမ်း တွေ Feel ဖြစ် ပြီး တော့ လိုက် ရန်တွေ မူနေ ကြတယ်။ တကယ် တော့ ဒါကြီး က ပျော် ရွှင် မှုတွေပဲ ပေးနေ တာ ပါ ” လို့ ပြောလာ တဲ့ အလှ မယ် ၊ မော် ဒယ် ၊ သရုပ် ဆောင် ရွှေအိမ်စည် … .
crd : Shwe Eain Si
ေရႊအိမ္စည္ က ေတာ့ Miss အလွ မယ္ ၊ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ ေယာက္ ပါ ။ ဆံပင္ ရွည္ရွည္ ေလး နဲ႔ ေက်ာ့ရွင္း ၿပီး ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ယုံၾကည္ မႈ အ ျပည့္ ရွိ တဲ့ သူမရဲ့ ဟန္ပန္ အမူ အရာေတြက ပရိသတ္ ေတြ ၾကားမွာ အေတာ္ ေလးကို ေရပန္း စားေန ပါ တယ္ ။
ေရႊအိမ္စည္ က ေတာ့ စကား ေျပာ ရင္ လည္း ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာ တတ္ ၿပီး သူမကို အမ်ိဳးသား ပရိ သတ္ ထက္ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္ ေတြ က ပိုမို သ ေဘာက် အားေပး တာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။ ” ကိုယ့္ ရဲ့ LOOK ကို ၿပ ၿပီး စားခ်င္ တဲ့ အ တြက္ ဒီ Modeling Industry / ေမာ္ဒယ္ ေလာ က ထဲ ကို ဝင္လာ တာ ေလ ။
ကိုယ့္ မွာ ရွိ တဲ့ အရာ ေတြ ကို ျပမ စား ရရင္ ဘာကို ျပစား ရမလဲ ? က်မ ရဲ့ ရင္သား ေတြ က ဘယ္သူ႔ ကို ဘာ လုပ္ထား လို႔လဲ မသိ ဘူး.. ဒါကို အရမ္း ေတြ Feel ျဖစ္ ၿပီး ေတာ့ လိုက္ ရန္ေတြ မူေန ၾကတယ္။ တကယ္ ေတာ့ ဒါႀကီး က ေပ်ာ္ ရႊင္ မႈေတြပဲ ေပးေန တာ ပါ ” လို႔ ေျပာလာ တဲ့ အလွ မယ္ ၊ ေမာ္ ဒယ္ ၊ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေရႊအိမ္စည္ … .
Previous post ကိုယ်က ရှချင်ပေမယ့် သူတို့က ပေးမရှလို့ အစစ်မတွေ နေဝင်ချိန် ရောက်ပြီလို့ အလှကို ထုတ်ပြရင်း ဖြေဆို လိုက်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် ( ရုပ်သံ )
Next post ချွေးမလေးနဲ့ ရင်ခုန်စရာအချိန်လေးတွေ ……